UPaul Otellini, owanceda ukuTshintshela kwiiNkqubo zeIntel, usweleke eneminyaka engama-66 | Ndisuka mac
UPaul Otellini, owayesakuba yi-CEO ye-Intel, owayenempembelelo enkulu kwi Utshintsho olusuka kwi-Apple luye kwi-Intel, lushiya ii-PowerPCs ecaleni, Usweleke ekuqaleni kwale veki. U-Otellini usweleke elele ngoMvulo, Okthobha 2 eneminyaka engama-66. UPaul Otellini wayengu-CEO we-Intel wesihlanu kwaye wanceda inkampani ukuba yenze uhlengahlengiso olwenziweyo olugcina ubunkokeli bayo njengomenzi weprosesa ophambili kwihlabathi. Umphathi we-Apple u-Tim Cook uthumele amazwi ovelwano kusapho lwase-Otelleni, esithi u-Otellini wayengumhlobo omkhulu wenkampani.
Sithuthuzelana nosapho lakwa-Otellini kunye naye wonke umntu e-Intel. UPaul wayengumhlobo omkhulu weApple. https://t.co/D8Y8rmYP4x
- Tim Cook (@tim_cook) Oktobha 3, 2017
UPaul Otelli weza kwi-Intel ngo-1974 kwaye ngokuthe ngcembe wenyuka kwinkampani de kwisikhundla sokuba ngumphathi omkhulu ngowama-2005. Kwakuloo nyaka, iApple yabhengeza ukuba izakuqala ukusebenzisa iprosesa ye-Intel kwi-WWDC eyayibanjelwe, enye yezona ndaba zibalulekileyo kwihlabathi lobuchwephesha kulo nyaka. Phantsi koqeqesho luka-Otellini, olwathatha iminyaka esi-8, i-Intel iye ngokuthe ngcembe yaba yenye yeenkampani ezinkulu emhlabeni, ifumana imali engaphezulu kunakwiminyaka engama-45 edlulileyo yembali.
Abantu abaninzi khange babonakalise ukuzinikezela kukaPawulos kuphela, kodwa nokwakhe Ithemba kunye nokuqonda akubonakalisileyo kwiprojekthi nganye ayenzileyo. Ngokuka-Brian Krzanich, umongameli wangoku we-Intel, "ukuqhuba kwakhe ngokungakhathali, uqeqesho kunye nokuzithoba yayiziziseko zobunkokheli bakhe ezifunyanwa yinkampani ngoku kwihlabathi liphela."
U-Otelli wayishiya inkampani ngo-2013 kwaye ukusukela ngoko uchithe ixesha lakhe esenza imisebenzi yobubele kuzo zonke iintlobo ukongeza ekusebenzisaneni ngokwezimali kwezinye zeeprojekthi ebezithiwe thaca kuye. Okucacileyo kukuba emva kokuthatha umhlala-phantsi, akazange afune ukwahlulahlula ngokupheleleyo kwitekhnoloji, awayenike ngaphezu kwesiqingatha sobomi bakhe bonke.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » UPaul Otellini, owanceda ukutshintsha kwiiprosesa ze-Intel, usweleke eneminyaka engama-66
"Iifoto ezabiwe kwi-iCloud" zenziwe zasebenza kwiMacOS ePhakamileyo yeSierra